यो वर्ष उन्नति सहकार्य लघुवित्तको नाफा करीब ४६% कम | आर्थिक अभियान
यो वर्ष उन्नति सहकार्य लघुवित्तको नाफा करीब ४६% कम
वैशाख २७, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले रू. ३ करोड ७९ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफा ४५ दशमलव ७३ प्रतिशत कम भएको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ६ करोड ९९ लाखभन्दा बढी खुद नाफा गरेको थियो । यस वर्ष सञ्चालन नाफामा पनि खुद नाफाकै अनुपातमा कमी आएको छ ।
गत वर्ष रू. ११ करोडभन्दा बढी सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ६ करोडभन्दा बढी मात्र यो नाफा गरेको हो । यस वर्ष सम्भावित जोखिम शीर्षकमा ३७९ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी रकम छुट्याएकाले नाफामा असर परेको हो । गत वर्ष रू. २ लाखभन्दा बढी सम्भावित जोखिम शीर्षकमा रकम छुट्याएको कम्पनीले यस वर्ष रू. ९ लाख ९३ हजार छुट्याएको हो ।
३० प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी वृद्धि गरी रू. २२ करोड ९० लाख २० हजार पु¥याएको कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ९ करोड ३१ लाखभन्दा बढी कायम भएको छ । जगेडा कोष रकम भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष १८ दशमलव ३८ प्रतिशत कम भएको हो ।
यस वर्ष १२ दशमलव २५ प्रतिशत कम रू. २ अर्ब २३ करोड ४० लाख कर्जा सापटी लिएको कम्पनीले गत वर्षभन्दा करीब १३ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ । निक्षेप संकलन भने गत वर्षभन्दा करीब १२ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ४ करोड ५२ लाख भएको छ । गत वर्ष ४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा यस वर्ष ४ दशमलव ८२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २२ दशमलव शून्य ९ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४० दशमलव ६७ छ । यस अवधिसम्म कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ५९ दशमलव ७७ गुणा रहेको छ ।